sys | Global Technology Group
+95 1 654 871 marketing@globalnetmm.com
by sys | Nov 20, 2019 | Activities
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဝေလ်ဘာရော့စ်ဟာ Global Technology Group စီးပွါးရေးဦးဆောင်သူများကို မြန်မာစီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အတူသံအမတ်ကြီး မာစီရယ်ကိုဘန်ကောက်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ အင်ဒို-ပစိဖိတ် စီးပွားရေးဖိုရမ်မှာ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Secretary of Commerce...
Global Technology is supporting and assisting Ministry of Education regarding with the connectivity and advanced technology solutions which is so much important for the university of Yangon to come back to the higher ranking among Asia Universities like before 1970...
Myanmar GDP increase 71 Billions USD in 2019
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နည်းပညာဘက်တွင်ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သံအမတ်ကြီး စကော့မာစီရယ်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အနာဂတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းတို့၏အမြင်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် နည်းပညာကဏ္ဍအတွင်း...
The ideal foundation for deploying IP-based applications across your organisation Businesses with multiple office locations prefer GlobalNet IP VPN for its security and reliability. Connect to over 10 points-of-presence with world leading IP VPN provider. Grow...
Global Technology Company’s Donation of Rice ATM to produce rice for non-blue days
Global Technology Group 2019 AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Award for 4th Consecutive year
အင်တာနက်နှင့် ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Global Tech နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့များ လက်မှတ်ရေးထိုး
US-Myanmar Connectivity And 5G Workshop
Save the library Books Donations to Training School for girls
Building 16, Myanmar ICT Park, Universities Hlaing Campus, Yangon, Myanmar
Office Tel: +95 1 654 871
Office Tel: +95 1 2305325~28
Fax: +95 1 654870
#3-01, Building 16, Universities’ of Hlaing Campus, Hlaing Township, Yangon Region, Republic of Union of Myanmar.
Copyright © 2019 Global Technology Group.